काठमाडौं । कोरोना महामारीका बेला मौसमी रुघाखोकी र ज्वरोले पनि सताउने गरेको छ । कोरोना र मौसमी रुघाखोकी तथा ज्वरो उस्तै खालको हुने भएकाले मानिसहरू छिटो आत्तिने गरेका छन् । वर्षा यामको शुरु तथा...
काठमाडौं, २८ साउन । सुनसरीको दुहबीमा सञ्चालित श्री लुनकरणदास–गंगादेवी चौधरी च्यारिटी अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । काठमाडौंको थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल र बसन्त चौधरी फाउण्डेसनले संयुक्त रुपमा ५ करोड रुपैयाँ...
काठमाडौं, २८ साउन । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलको निःशुल्क ओपीडी अभियान अन्तर्गत आउने शनिबार दुई फरक–फरक क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले सेवा दिने भएका छन् । नर्भिकमा कार्यरत वरिष्ठ हर्मोन रोग विशेषज्ञ डा. मधु पाण्डे र वरिष्ठ बाथ...
डा.ओममूर्ति अनिल उच्च रक्तचापमा औषधिको प्रयोग जुनसुकै व्यक्तिका लागि पनि सहजै स्वीकार्य हुँदैन । यसका कारणहरूमध्ये औषधिको साइड इफेक्टको डर, लामो समयसम्म निरन्तर प्रयोग गर्ने झन्झट, आर्थिक भार, बानी पर्ने डर, अरूले के भन्ला...
फोक्सोलाई कसरी सफा गर्ने ?
काठमाडौं । चुरोट खानेलाई मात्रै होइन अन्य मानिसलाई पनि फोक्सोको समस्या हुने गर्दछ । यदि तपाईले चुरोट खानुहुन्छ भने फोक्सो अवश्य खराब हुन्छ । घरेलु विधि प्रयोग गरेर ७२ घण्टाभित्र आफ्नो फोक्सो सफा गर्न...
काठमाडौं । काजुमा मेग्निसियम, कपर, आइरन, पोटासियम लगायतका तत्व पाइन्छ । पत्येक दिन दुई वाा तीन पिस काजुको सेवन स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । काजु ऊर्जाको राम्रो स्रोत हो । काजुमा प्रोटिनको मात्रा...
मुटुरोगमा के–के खाने ? के हो अथेरो स्क्लेरोसिस ?
के हो अथेरो स्क्लेरोसिस ? रक्तनलीभित्र बोसो, कोलेस्टेरोल, क्यालसियम र अन्य तत्वहरूको प्लाक बनेर रक्तनली साघु¥याउने रोगलाई अथेरोस्क्लेरोसिस भनिन्छ । यसरी नशाभित्रै प्लाक बनेर रक्तनली साँघुर्‍याउनुमा मुख्यतः रक्तचिल्लोको गडबढी, खानपान शैली, मधुमेह, उच्च रक्तचाप,...
डा.हेमराज कोइराला अमला अमला सबल प्रतिरक्षा प्रणालीको लागि अमला अत्यन्त लाभदायक फल हो। अमलाको नियमित सेवनले शरीरमा भिटामिन, मिनरल्स, फाईबर र एण्टिअक्सिडेण्टको भरपुर मात्रामा आपूतिी गर्छ । अमलामा प्रतिरक्षा प्रणालीको लागि अति आवश्यक भिटामिन...
डा. हेमराज कोइराला सामान्यतया तनाव हुँदा मुटुको धड्कन बढ्ने श्वासको गति बढ्ने रक्तचाप घटबढ हुँने, मांसपेशी कडा हुँने, टाउको दुख्ने, अम्लपित्त बढ्ने, हात्केला, पैतला एवं काखीबाट पसिना आउने, आँखाको नानी फैलिने, निन्द्रा नलाग्ने, खाना...
क्यान्सर भन्ने बित्तिकै एउटा असाध्य रोगको रुपमा हामीसबैले बुझेका हुन्छौ तर आरम्भिक दिनमै ठम्याएर उपचार गर्नसके क्यान्सर पूरै निको हुनसन्छ । यो रोग लाग्दा क्यान्सर प्रभावित भागको कोषहरु अनियन्त्रित रुपमा बढ्ने, अन्य तन्तुहरुमा पनि...
भिटामिन ‘डी’का यी गम्भीर आठ लक्षण, यस्तो छ उपचार पद्धति
डा. हेमराज कोइराला परिचय भिटामिन ‘डी’ चिल्लोमा घुल्ने स्टेरोइडल (कोलेस्टेरोलबाट बनेको) भिटामिन हो । यो भिटामिन प्राकृतिक रुपमा धेरै कम खानेकुराहरूमा मात्र पाइन्छ । क्यालसियम र फस्फोरस जस्ता महत्वपूर्ण खनिज तत्वहरूको उपपाचन (metabolism) का...
सीटी भ्यालु के हो ? यो घटी वा बढी हुँदा के हुन्छ ?
काठमाडौं, २ जेठ । दोस्रो लहरको उछालसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ । पीसीआर पोजिटिभ आएका हरेक व्यक्तिलाई सीटी भ्यालुमा धेरै चासो देखिएको छ । सीटी भ्यालुबारे फरकफरक धारणाका कारण धेरै व्यक्तिमा कन्फ्युजन...
डा पोखरेललाई कलम के सिपाही अवार्ड